ကျွန် တော် တို့ ညစဉ်ညတိုင်း အိပ်ရင် အိပ်မက် တွေမက်ကြတယ် ၊ တချို့ ညတွေကြတော့လည်း မမက်ဘူး ၊ တချို့ ည တွေကျတော့ မက်တယ် မမှတ်မိဘူး ၊ တချို့ ည တွေကျတော့ အိပ်မက် က ထူးခြား လွန်းလို့ သိသိသာသာ ကို မှတ်မိနေတာမျိုး ၊ အစုံပါပဲ ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရတော့ ကျွန်တော် တို့ မက်လေ့ ရှိတဲ့ အိပ်မက် များက အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ပုံစံ (၅) မျိုး ရှိပါတယ် ။
ဒါကတော့ လူတိုင်း ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ ။ ချောက်ကြီးထဲ ပြုတ်ကျသွားတာ ၊ တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို လိုက်နေလို့ လွတ်အောင်ပြေးရတာ အစရှိတဲ့ တစ်ခုခု ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖြစ်လာတာတွေက အိပ်မက်ဆိုး တွေပါပဲ ။ များသောအားဖြင့် တော့ အိပ်မက်ဆိုးတွေဟာ ကိုယ့်လက်တွေ့ဘဝ နဲ့ ထင်ဟပ် ပြီး မက်လေ့ရှိပါတယ် ။ မိသားစု ပြဿ နာတွေ ၊ သမီးရည်းစား ကိစ္စ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး အလွံအကျွံ သုံးတာ ၊ စိတ်ကျရောဂါ အစရှိတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေနဲ့ စပ်လျင်းပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ insecurity ကြောင့် အိပ်မက် ဆိုးတွေ မက်ရတာဖြစ်ပါတယ် ။
2) အကြိမ်ကြိမ် မက်တဲ့ အိပ်မက်
အိပ်မက် တစ်ခု ကို ၃ / ၄ ကြိမ် ပြန်မက်တာမျိုး ကြုံဖူးလား ? ဒါပေမယ့် အဲ့လို ပြန်မက်တယ်ဆိုတာလည်း အတိအကျ မပြောနိုင် ၊ ပြန်မက်တာရော ဟုတ်လို့လား ဆိုပြီး ဝေဝေဝါးဝါး ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ တကယ်တော့ အိပ်မက် တွေကလည်း တီဗီကြော်ငြာ တွေလို အခေါက်ခေါက်ပြနိ မက်လေ့ရှိပါတယ် ။ ကိုယ့်စိတ်မှာ အရမ်းစွဲ နေတဲ့ အရာ ၊ အဖြစ်အပျက် ၊ အထူးသဖြင့် ဝမ်းနည်းစရာ ၊ ထိပ်လန့် စရာ ကိစ္စမျိုးတွေကို အခေါက်ခေါက် အိပ်မက် ပြန်မက်တတ်ပါတယ် ။
3) ပျော်စရာ အိပ်မက်
မိတ်ဆွေ တို့တော့ ဘယ်လိုလဲ မသိဘူး ။ ကျွန်တော်က တော့ ပျော်စရာ အိပ်မက် မက်ခဲတယ် ။ ကျွန်တော့် လက်တွေ့ဘဝမှာ stress တွေများလို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ် ။ တကယ်လို့ မက်ဖြစ်တဲ့ အခါတွေမှာလည်း နိုးလာရင် သိပ်မမှတ်မိ တော့တာများတယ် ။ scientist တွေ အဆိုရတော့ ပျော်စရာ အိပ်မက် တွေမက်တာဟာ အိပ်မက်မက် သူဟာ သွားနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပြဿ နာတစ်ခုခု ရှိနေတာကို ရည်ညွှန်းတာပါတဲ့ ။ ထူးဆန်းတယ်နော် ။
4) တိကျ သေချာတဲ့ အိပ်မက် တွေ
သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် အိပ်မက် မက် တဲ့ အခေါက်တော်တော် များများ မှာ ကျွန်တော်တို့က ဒါဟာ အိပ်မက် မက် နေတာပဲ လို့ မသိကြဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ အခါ တွေမှာတော့ အိပ်မောကျ ၊ အိပ်မက် မက်နေရင်းပဲ ငါ အိပ်မက် ထဲ ရောက်နေတာပါလား ဆိုတဲ့ အသိစိတ်ဝင်လာကျတဲ့ အိပ်မက်မျိုး တွေရှိတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ရှားရှားပါးပါး အသိစိတ် အတိအကျ ရှိတဲ့ အိပ်မက် မျိုး ဖြစ်ပါတယ် ။
5) နမိတ်ပြ အိပ်မက်
ဒီတစ်ခု က ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး တွေနဲ့ ထိတွေ့မှု အများဆုံးလို့ ထင်ပါတယ် ။ တချို့ဆို အိပ်မက် တွေမကောင်းဘူး ဆိုပြီး ယတြာ ချေတာ ဘာညာ တောင် ရှိကြပါတယ် ။ ဥပမာ – အိပ်မက် ထဲမှာ မြွေတွေ မက်ရင် ပိုက်ဆံဝင်တာတို့ ၊ သွားကျိုးတာကိုမက်ရင် မိသားစုဝင် ထဲက လူကြီးတွေ ကျန်းမာရေး စိုးရိမ် စရာ တစ်ခုခုရှိလာတာ အစရှိတဲ့ အယူသီးတာမျိူးတွေ ရှိကြပါတယ် ။ နောက်ပြီး နှစ်လုံး ဂဏန်း ၊ ထီဂဏန်း တွေ ၊ အတိတ်နမိတ် ကောက်တာ အစုံပဲနော် ။
မိတ်ဆွေ တို့ရော ဘယ်လို အိပ်မက် တွေကို အများဆုံး မက်ဖြစ်ကြလဲ ?
၇ရက်သားသမီး တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း ( ၁၁-၈-၂၀၁၉ ) မှ ( ၁၇-၈-၂၀၁၉)